Indlu enomtsalane, ebekwe kwisibiyeli sebhulorho - I-Airbnb
Indlu enomtsalane, ebekwe kwisibiyeli sebhulorho
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguMikael & Susanne
UMikael & Susanne yi-Superhost
Indawo esembindini, ehlaziyiweyo kwaye ixhotyiswe ngokupheleleyo eFärjestaden!
Ifakwe imizuzu emi-3 yokuhamba ngeenyawo ukuya kwisikhululo sebhasi "Snäckstrand emazantsi" apho unokuya emazantsi e-Öland naseKalmar ngokulula kakhulu. Ukuhamba umgama ukuya eFärjestaden ngeevenkile kunye neeresityu. Ukuya e-Eriksöre kwilali yesitalato yi-7km ukuya e-Ekerum 18km!
Ipatio yeyakho eneendawo zokoja inyama kunye nendawo yokupaka yasimahla ngaphandle nje kwendlwana.
I-cottage ihlaziywa kwaye ixhotyiswe ngokupheleleyo. Indawo entle kufutshane neKalmarsund kunye neFärjestaden kunye neevenkile zayo kunye neeresityu. 3 min ukuhamba ukuya elunxwemeni, ilungele abo bathanda ukuqubha okuhlaziyayo!
I-cottage ine-25 ecwangciswe kakuhle kwaye ihonjiswe ngokunambitheka kweemitha zesikwere kunye nokufakwa kokukhanya okuthandekayo. Ipatio yeyakho eneendawo zokoja inyama kunye nendawo yokupaka yasimahla ngaphandle nje kwendlwana.
Kwi-cottage kukho iibhedi ezimbini ezingatshatanga, iitafile kunye nezitulo kunye nezitulo ezitofotofo. ITV yeChromecast kunye neWifi yasimahla. Ikhitshi enezixhobo ngokupheleleyo kunye negumbi lokuhlambela elineshawa kunye nesomisi setawuli.
Unxweme lwaseSnäckstrand lukumgama wokuhamba apho unokuqubha kwaye ugcakele ilanga uzimele. Saxnäs Golf 5 km, Ekerum Golf & Resort 18 km, Grönhögen Golf 47 km.
Umbuki zindwendwe ngu- Mikael & Susanne
I-cottage ikwicebo lethu kwaye ke sisondele ukuba unemibuzo!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mörbylånga N